Poa-basy teny Tsaralalana Polisy nahatifitra tsinahy olona roa
Fitombenana sy fen’olona roa samy hafa no voatifitry ny basy tsy nahy ana mpitandro filaminana teo Tsaralalana omaly alarobia 31 jolay tolakandro.
Raha ny voalazan’ny loharanom-baovao azo antoka iray dia noho ny fahanteran’ity fitaovam-piadiana ity no nahatonga izany. “Voatifitra tsinahin’ny polisy iray ny olona roa. Basy efa antitra tamin’ny taona 1947 izy io. Anisan’ireo fitaovam-piadiana zokiny indrindra efa tsy fampiasa intsony fa noho ny tsy fahampian’ny fitaovan’ny mpitandro filaminana aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana dia mbola maro izy ireny no ampiasaina nefa mampidi-doza toy izao. Tsy mba misy hidiny mantsy izy ireny fa vao misy bala ka voadona na mitontona tahaka ilay omaly dia mipoaka. Sendra ny andro miditra ity polisy iray izay mpiambina mpandraharaha ara-toekarena handeha hamindra vola be. Noho io fitondrana vola io dia efa nofahanana ny basy fa tojo ny patsa iray tsy omby vava”, hoy ny mpitandro filaminana iray.
Basy efa famotika
Midika izany fa tandindomin-doza ny mpitandro filaminana izay mampiasa azy ireny, indrindra ny olom-pirenena mifanerasera amin’izy ireny. Azo heverina fa tokony ho anisan’ireo basy hopotehina eny amin’ny lapan’ny tanàna indray koa ny karazan’ity basy ity. Anisan’ny mampintaraina ireo mpitandro filaminana ny kojakojan’izy ireo, tsy ny basy ihany fa ny “menotte” koa. Ny fiara tsy mataho-dalana maro tonga fa ny basy mamono olona tsy manan-tsiny. Araka ny fampitam-baovao azo farany, nitolo-tena nihazo ny BC avy hatrany ity polisy ity ary eo am-panatanterahana ny famotorana ny tompon’andraikitra. Ankoatra ireo olona roa voatifitra, nisy fitaovana sy fananana hafa ihany koa simba.